Olee otú Naghachi Data si HP Flash Drive
> Resource> Flash Drive> Olee naghachi Data si HP Flash draịva
Enwere m ike Naghachi Data si My HP Flash Drive?
Hi, m chọrọ ime ka a mgbake flash disk m HP Obere 110-1131DX tord. Sistemụ bụ windows 7. The ngwọta na-ukwuu kpọrọ ihe. Ekele.
Iji weghachite furu efu data si HP flash mbanye, ị ga mkpa kwụsị iji flash mbanye ozugbo ke data e furu efu. Ma ọ bụghị nke furu efu data pụrụ ịbụ overwritten site ọhụrụ data. Mgbe ahụ ị pụrụ abịa Internet iji họrọ kasị mma mgbake usoro.
A bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Nke a dị ike mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị iji naghachi furu efu faịlụ site na HP flash mbanye na ala, n'agbanyeghị gị faịlụ na-efu ruru mberede nhichapụ, mis-njikwa, usoro njehie ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Na ya, ihe niile ị chọrọ ime bụ iṅomi gị HP flash mbanye na họrọ faịlụ ka naghachi.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery ugbu a. Site na iji ikpe mbipute, ị nwere ike iṅomi gị flash mbanye tupu ịzụta maka mgbake. Nke a na atụmatụ bụ n'ezie oké!
3 Nzọụkwụ ịrụ HP Flash Drive Data Recovery
Ugbu a, ka hazie mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery. N'ihi na Mac ọrụ, ị nwekwara ike na-eso yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Naghachi Mode
Họrọ Naghachi Mode Mgbe launching Wondershare Data Recovery, ị ga-ahụ a window na awade 3 mgbake ụdịdị. N'ebe a, anyị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" nọgide na.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị HP Flash Drive ka iṅomi maka Lost Data
Ebe ị mkpa ijide n'aka na gị HP flash mbanye nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị. Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka na-egosi niile ike draịva na kọmputa gị, gụnyere mpụga nchekwa ngwaọrụ.
Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu maka gị HP flash mbanye na pịa "Malite" ka iṅomi.
Rịba ama: "Kwado Deep iṅomi" bụ ndị ọzọ dị ike, ma, ọ na-ewe ogologo na ọ dịghị mbụ faịlụ aha ga-gosiri na scanning N'ihi.
Nzọụkwụ 3 naghachi faịlụ fromYour HP Flash Drive selectively
Mgbe iṅomi risịrị, niile hụrụ faịlụ ga-egosipụta na ekpe nke usoro ihe omume windows. Ị nwere ike ịlele ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji naghachi site faịlụ aha ma ọ bụ faịlụ ụzọ. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ihuchalu ụfọdụ faịlụ na ụdị dị ka photos.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Rịba ama: N'ihi na mgbake nchekwa, biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ gị HP flash mbanye. Dị họrọ ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụ a na-aga na kọmputa gị na-ha.
Olee otú encrypt a flash mbanye iji hụ na safty gị data
Easy Guide nke Imation USB Iweghachite